Как открыть смс и ммс на компе,если телефон не читает? | Полезная информация для всех
ဖုန်းကိုမဖတ်ပါဘူးဆိုရင်, သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် SMS နှင့် MMS ဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Чтобы прочитать данные смс и mms на Вашем компьютере, для этого нужен кабель от телефона к компьютеру , а также программа Вашего телефона, на диске( программа должна продаваться в комплексе с Вашим телефоном модели) , и которая может быть должна была установлена на компьютере.
После соединения USB кабеля от телефона к компьютеру , Вы в данной программе можете без проблем открыть и прочитать смс, а также mms.
Если же у Вас нет возможности, прочитать смс и mms на телефоне, телефон в таком случае стоит сдать в ремонт , для устранения неполадок.
သငျသညျ code ကို activate လုပ်ဖို့ရှိပါက esch အင်တာနက်မှတဆင့် MMS ကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုသိကြ၏။
ဖုန်းကိုမဖတ်နိုင်သောတစ်ခုချင်းစီ MMS ကို, ထိုပုံရိပ်ကိုဒါမှမဟုတ် image ကိုသင်က link မှာကြည့်ရှုနိုင်မယ့် Postscript ရှိသေး၏။ တစ်ခါတစ်ရံသင်တစ်ဦးကုဒ်သို့မဟုတ် captcha, ဒါပေမယ့်အားလုံးဿုံဖွင့်လှစ်ထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်, ဒီ link ကို ယူ. browser ကိုစစာရိုက်။ ဒါကပဲကွန်ပျူတာပေါ်မှာဖိုင်ကို3ရက်အတွင်းနိုင်ပါတယ်, ထို့နောက်သူမရရှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေကြည့်ဖို့ပါပဲ။
21 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,343 စက္ကန့်ကျော် Generate ။